SIDA LOO ABUURO THUJA DHUL FURAN - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Ugu Weyn Ee Warshad ornamental koraya
Beeritaanka Tui iyo daryeelka saxda ah ee iyada
Thuja waxaa iska leh qoyska qaawan.
Geedkani waxa uu ka soo baxayaa (ama geed), oo leh taajajir cufan, wuxuu qurxin doonaa beer kasta oo guriga, xaafadaha magaalada ku yaal, barxad magaalada, iwm.
Marka lagu daro taajka cagaarka leh, thuja aad kuugu farxi doonto carafkeeda, tan iyo alaabteeda waxa ku jira saliidaha lagama maarmaanka ah.
Maqaalkani waxaan si faahfaahsan u fahmi doonaa waxa uu yahay geedkii thuja iyo sida habboon in loo daryeelo.
Noocyada iyo noocyada Tui
Dunida waxaa jira 5 nooc oo tuubo ah: galbeedka, chinese, korean, japanese iyo laaban.
Ma taqaanaa? Nuuca Tui waa 90-200 sano.
Thuja Japanese - geed ilaa 18 mitir leh cirbado jilicsan. Wadanka - Japan. Waxay u dulqaadanaysaa heerkulka hooseeya xilliga jiilaalka. Uma baahnin in badan oo qoyaan, laakiin ma u dulqaadan hawada wasakhaysan, taas oo ah sababta ma koraan degaannada magaalooyinka.
Thuja Korean - geed oo leh taaj sarajoog ah oo laamood ah. Cirbadaha jilicsan waa caleemo aan caadi ahayn (ilaa 2 cm) oo ah qaabka saddex-geesoodka ah. Cirbadaha dhinaca dhinaca dambe waa lacag dhalaalaya, dhinaca horena waa cagaar madow. Wadanka - Jasiiradda Kuuriya. Ruushka ayaa kordhay oo keliya koonfurta.
Thuja weyn ama laaban - waa geed jeexjeexan ah oo u ekaa sida qoryaha. Noocyada ugu kobcaya ee Tui (ilaa 30 cm sanadkii). Waxay gaari kartaa dherer ah 15 mitir, oo ah width 3 - 5 mitir. Cirbadaha waa cagaar madow, waxaa jira dhibco cad oo hoose. Crohn ayaa iftiin leh caraf xoog leh. Eeg qabowga u adkaysta, dabaysha u adkaysta. Kulayl xoog leh ayaa u dulqaadaneysa, sababtoo ah waxay si fiican u koraan gobollada qoyan.
Thuja bari - waa geed ku yaalla ilaa 18 mitir oo dherer ah, taas oo inta badan kuuskuusocod ah 1-3 cm oo dherer ah. Laantu waa mid qumman, flat. Noocyadaasi waxay u dulqaadanayaan abaar, kuleyl, mana aha wax xagjir ah oo ka kooban halbeegga ciidda. Jiilaalka leh heerkulka hooseeya ma noolaan doono.
Thuja galbeed - geedo dahab ah oo dhererkiisu yahay 15 - 20 mitir iyo width 3 - 5 mitir. Waxay leedahay ubax yaryar oo midab leh oo jaale ah iyo jaale ah. Xilliga xagaaga, cirbadaha waxay leeyihiin cagaar mug (hoos udhaca hoose) midabka, iyo xilliga qaboobaha waxay ku qaataan maro madow (waxay u beddelaysaa mar labaad xaga guga). Nidaamka xididku waa mid xoqan oo jeexan. Thujaarta reer galbeedku si fiican ayey u koraan marka hoos loo dhigo qorraxda, wax yar ka sii darani qorraxda qorraxda (laakiin ma u dulqaadanayso abaar daran iyo kuleyl). Haddii noocyada noocan ah lagu dhex beeray hoosta cufan, ka dibna laamihii thuja waa khafiifin, oo tani waxay u ekaataa muuqaalkeeda. Thuja galbeed waxay ku koraysaa ciid kasta, waa dabayshu iska adkaato, laakiin cagaheena, waxay u badan tahay sababtoo ah caabbinta dhaxan ee fiican (waxay leedahay in ka badan 30 nooc).
Ma taqaanaa? Ruushka, thuja wuxuu u muuqday XViii qarnigii.
Sida loo faafiyo Thuja
Thuja - warshad aan qabin. Wuxuu ku koraa hooska iyo qorraxda. Wuxuu si fiican uga badbaadaa xayawaanka kala duwan: peat, sandy, ciid, ciidda, laakiin qoyaanka ciidda waa inay ahaato mid ku filan.
Warshad lagu beeray kaliya waa in la siiyaa 10 litir oo biyo ah usbuucii, iyo 15-20 litir oo biyo ah intii lagu jiro abaarta (doorbidayaa in la dubey 2 jeer toddobaadkii). Waxaad u baahan tahay inaad ogaato goorta beerta thuja ee dalka, iyo waxa da'da ah ee seedling diyaar u tahay goob cusub beeritaanka.
Waa muhiim! Waxaa lagama maarmaan ah in la beero thuya oo leh buro waaweyn oo ka mid ah dhulka (laga soo qaado weel ama ka soo horjeedka hore ee koritaanka). Waxaa lagugula talinayaa inaad ku shubtid godin leh dhul baaxad leh (1/5 cirbadaha mugga guud ee dhulka).
Neefinaynta gooynta thuya
Barkhad waa inuu ogaadaa sida loo koro thuja ee dalka. Thuja waxay ku tarmi kartaa miraha ama gooynta.
Marka ay tarmaan, thuja isticmaalaan gooyn lignified (qaadan caleemaha 2-3 sano jir ah 25-40 cm dheer) ama gooyn semiish ah 10-20 cm dheer (gooyn waa in la gooyaa guga hore ama June).
Jeexid jirida waxaa lagu daaweeyaa xal heteroauxin ah. Isku-goynta, xor ka ah miisaan ka hooseeya (qiyaastii 5 cm) oo lagu beeray ciidda: ciidda webiga, peat iyo dhulka dhulka la dhigto (1: 1: 1).
Ciidda la diyaariyey nadiifinta xal daciif ah oo potassium ah. Moolka beerto waa 1.5 - 2 cm, iyo geedo ku daboolan on top (waxay sameeyaan aqalka dhirta lagu koriyo).
Waa muhiim! Waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo gooyn si ay saldhig u noqoto qoryaha gaboobay gaboobay - "cirib". Tani waxay ku kordhineysaa inay si fiican u dhisto.
Gooyn ah ee lagu koriyo u baahan tahay si joogto ah hawada (waqtiyada hawadu mar walba korodho) oo qoyi ciidda (waxaa fiican in lagu buufiyo carrada). Gooynta Rooted (geeddi socodka wuxuu socdaa 2-3 bilood) adag tahay.
Bishii Nofeember waraabiyo caleemaha, laanta dabka ama balka. Marka heerkulku hoos u dhaco -5 ° C, waxaad u baahan tahay si loo daboolo waraabinta seedling.
Kobcinta thuja ka soo abuur
Waxaad dufaaci kartaa noocyada kala duwan ee thujas oo leh miraha cusub ee la goostay. Adiga oo aad heleyso 3-5 sano.
Iyada oo habkan, miraha u baahan tahay baxaan xilliga dayrta ee barafka (tani waa dabiiciga caadiga ah).
Guga, abuurka laga soo uruuriyo yar yar iyo lagu beeray baayacmushtarka qiyaas ahaan 0.5 cm qoto dheerdabooli balka balka ah. Saldhigyada seeding ayaa la dhigay meel qabow mug leh.
Caleemaha waxay daboolaan gabbaadyada ka soo baxa qoraxda. Carrabku waa inuu si joogto ah u dabacsan yahay oo qoyan yahay. Wakhti ahaan, waa la fulin karaa quudinta leh xal daciif ah oo slurry (1:20).
Talooyin loogu talagalay beeritaanka thuja ee dhulka furan
Thuja: beerashada iyo daryeelka ee berrin furan - tani waa macluumaad aad u muhiim ah ee beerta kasta. Beeraha waa in uu ahaadaa meesha maalinta oo dhan aysan noqonin qorraxda tooska ah.
Waa muhiim! Qorraxda qorraxda ka soo baxda thuja way engegaysaa, xilliga qaboobaha ka soo deyn doonta jirro.
Waxa kale oo muhiim ah in la ogaado nooca dhulka loo baahan yahay Tui. Doorashada ugu fiican waa carrada cawska lagu daro ee lagu daro ciid webiga iyo peat.
Haddii aad qorshaynayso inaad dhirato geedo badan oo thuja ah, ka dibna masaafada u dhexeeyso: 1 m (haddii aad dhashid diyaarso hal dillaac ah), 2 m (haddii qallafku yahay 2-isku xigo), 5m (haddii aad qorshaynayso inaad abuurto ceel yar oo tui ah). Qoryaha waa la baabi'iyey dhulka 60-80 cm.
Dad badan ayaa raba in ay si habboon u beddelaan thuja si aysan u dhiman. Waxaad ku celin kartaa thuja guga (laga bilaabo Maarso) ilaa dayrta (illaa November). Waxay u dulqaadaneysaa tallaalka si fiican, dabcan, oo keliya falalka saxda ah ee ninkii beerta ka shaqaynayay.
Waa muhiim! Haddii ciidda goobta ay tahay mid culus oo qoyan, ka dibna waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo lakab lagu qallajiyo 15-20 cm. Haddii goobta ay degto, markaas tuubooyinka dheecaan ayaa lagu dhajiyaa dabool.
Daryeelka Thuja Outdoor
Goobta furan, thuja waxay u baahan tahay fiiro gaar ah, taas oo ka kooban waraabinta joogtada ah, quudinta, dabcinta wareegga garabka iyo manjooyin (samaynta samaynta taajka).
Thuja waxay leedahay irbado ciriiri ah, taas oo ay sabab u tahay qoyaan badan oo uumi baxaya. Sidaa darteed, ninkii beerta ka shaqaynayay waa inuu hubiyaa in ciidda uusan engegin (xitaa dayrta).
Geedka cusub ee la tallaalay ayaa la waraabiyaa toddobaadkii, subaxii ama fiidkii (10-50 litir oo biyo ah 1 geedka - iyada oo ku xidhan xajmiga warshadda lagu beddelay).
Krona, bishii koowaad, sidoo kale waa suurad wacan in lagu waraabiyo. Daadinta ayaa ka caawisa in ay ka qaaddo boodhka cirbadaha iyo hagaajinta helitaanka ogsijiinta si loo dhiso geedka.
Waa muhiim! Dhulka carrada ku dhow ee thuja waa inuu qoyan yahay qoyan. Qallajinta dhulka waa waxyeello alwaax. Xumada qoyaanka waxaa go'aamiya dusha sare ee huruuda.
Marka la diiriyo waraabinta cimilada cimilada.
Dharka ugu sareeya
Dharka ugu horeeya ayaa loo baahan yahay geedka hadda la beeray: Epin, kiciyaha kobaca dabiiciga ah. Dharka ugu sarreeya ayaa ka caawin doona dhirta si ay u qaataan xidid iyo si fiican ula qabsadaan cudurada kala duwan.
Quudinta xilliga guga waxay ka kooban tahay walxaha dhuxusha-fosfooraska. Waxaad isticmaali kartaa bacriminimo adag "Kemira-universal" (50-60 grams halkii mitir). Bacriminta oo lagu daro waraabin badan. Dharka ugu sarreeya ayaa la sameeyaa laba jeer, oo leh nasasho laba toddobaad ah.
Waa muhiim! Haddii inta lagu jiro xilliga bacriminta macdanta laga qodo, ka dibna bacarin waa in la sameeyaa oo keliya 2 sano kadib.
Quudinta ee thuja ee dayrta aan la sameeyey.
Si aad u xoqdo thuja waxaad u baahan doontaa bukaanka iyo buug ama garsoore korantada.
Dhirta yar yar ma taabanayo 2 sano (waa inay xidid ku noqotaa meel cusub), ka dibna waad xajin kartaa oo u egtahay taajka. Isku xidhka gooyo:
Tirtirid laamaha qalalan iyo kuwa daciif ah (sida badanaa waa qallalan yihiin waxayna leeyihiin midab madow).
Tijaabinta hilibka. Laakiin ha ilaawin in khafiifinta xad dhaafka ah ay yareyn doonto tayada qurxinta ee thuja.
Manjooyin guri. Nidaamka waxaa la sameeyaa bisha Abriil. Xilliga xagaaga, foomka kaliya ayaa la saxay. Inta badan waxaad samaynaysaa manjooyin, dhumucdiisu waxay noqon doontaa taajkii. Marka la gooyo waa lagama maarmaan si loo hubiyo in laamaha la jaray wax ka badan 1/3 dhererka.
Waa muhiim! Nooca "thuga" nooca thuja, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro laamaha kororka sannadlaha ah.
Haddii aad qorsheyneysid inaad geedka geedka ku ballaariso, markaa waa inaad jarjartaa qaybta sare ee taajka. Bilowga bannaanka u bilaabi karaa samaynta taajka of thuja qaab ah kubad, curb ama cascade.
Haddii aad xiiseyneyso timo farshaxan leh, ka dibna weydii sida loo gooyo dhuxulada: waxaad siin kartaa geedka noocyo kala duwan oo ah xayawaanka, dhirta, talaabooyinka, iwm.
Ka hor inta aanad bilaabin timo, si taxadar leh uga fikir qaabka. Inta lagu guda jiro shaqada, mar mar u dhaqaaq dhinacaaga oo fiiri meesha aad u baahan tahay inaad ku xoqdo wax badan, iyo meeshii ay horayba u burburtay.
Dhar kala duwan oo dhoobo ah ayaa ku kora wareega sanadka, sababtoo ah timo ayaa u baahan doona wax ka badan hal.
Waa muhiim! Qalabka iyo xoqidda ayaa lagu sameeyaa cimilada qalalan.
Diyaarinta thuja jiilaalka
Haddii thuja ku sii korodho goobtaada, ka dibna ma aha mid aad u macquul ah si aad u weydiiso nooca daryeelka ay u baahan tahay xilliga qaboobaha. Waxaad u baahan tahay inaad si wanaagsan u diyaariso geedkii jiilaalka. Sidaa darteed waxaad u baahan kartaa:
kiciyeyaasha abuurista rootiyada;
peat iyo walax kasta oo mulching ah (caws, cirbadaha, sida balka);
buraashka ama daboolida gaarka ah ee lagu daboolayo geedaha qoyan.
Diyaarinta thuja ee jiilaalka waxaa lagu sameeyaa nidaamka soo socda:
Si loo joojiyo koritaanka firfircoon ee laamaha, waa inaad joojisaa quudinta Bacriminta nitrogen (badhtamaha August).
Xannuun, laaluush, laamo jajaban ayaa la jarjarey oo la jarjarey beerta.
Warshad waa in la waraabiyaa xalka aasaasiga ah ee asalka, ilaa bilawga hawada qabow. Habkani wuxuu wax ka tarayaa horumarinta xididdada qotodheer ee jiilaalka.
Wareegga Pristvolny waa inuu ahaadaa mulched (tani waxay ilaalin doontaa xididada sare ka soo dhaxan daran). Lakabka lafaha ah ee 5-7cm. Guga waxaa laga saari karaa si ay dhulka u dhaqaajiso si dhakhso ah.
Xilliga dayrta qalalan, thuja waxay u baahan tahay waraabin dhexdhexaad ah. Gaar ahaan kala duwan ee smaragd, kaas oo koraya sanadka oo dhan (iyo xitaa jiilaalka), u baahan yahay qoyaan.
Si aad u ilaaliso jirridda dabaylaha xooggan, waxaad ku rakibi kartaa tirooyin xoog badan oo geed ku xir.
Si aad u ilaaliso jirridda yar ee thuja ka soo dhaxan, waxaad ku dhejin kartaa kalluunka caws iyo cawska geed.
Si aad u ilaaliso sunta gubashada (waxaa lagu sameeyaa dhamaadka jiilaalka ama xilliga gu'ga, marka qorraxda cirbadaha iyo qoyaanka ka soo baxa nidaamka xididka weli ma iman), jiilaalka koowaad ka dib markii la beerto, thuja waxaa lagu duudduubay maro naadir ah. Laakiin ha ku daboolin jirridda aadka u adag, sababtoo ah inta lagu guda jiro barafka waxaa laga yaabaa inay dhacaan.
Waa muhiim!Waxaa jira daroogo gaar ah "Purshate", oo ka ilaaliya gubista gabbaldayaha. Waa in lagu buufiyaa cirbadaha - filim difaac ah ayaa la sameeyaa, taasoo aan u oggolaanayn qoyaanka in ay uumi baxaan. Daaqadan ilaalinta waxaa lagu dhaqaa biyo inta lagu jiro roobabka iyo waraabinta geedaha.
Intaa waxaa dheer, waxaa suurtogal ah in la dhiso hareeri gaar ah oo hareeraha geedka.
Hawlgalkani waa qaali, laakiin waa jawaabta ugu kalsoon ee su'aasha ah "Sida loo daryeelo thuja jiilaalka waddada?"
Goorta iyo sida boomaatada maqaarka ah: sharaxaadda iyo sawir, iyo sidoo kale isticmaalka warshadda ee daawada, cunto karinta iyo qurxinta
Tilmaamaha baradho sii kordhaya oo laga bilaabo abuur: geedo guriga iyo berrinka bannaan
Noocyada ugu fiican ee hadhuudhka samaynta duufaan
Waa maxay quudinta waa in bakeeriyada la quudiyo
Cucumber kala duwan "Herman"
Alwaax quraarad caag ah
Karootada sii kordhaysa guga
Noocyada tufaaxa ee hore
Dhalashadii asalka ah
Daryeelka Cherry ee dayrta
Tamaandho ee lagu koriyo
Qoyska saaxiibka ah ayaa wakiil ka ah ururinta guryaha ee beeralayda ubaxyada iyo beeraleyda by dhirta dheer-cagaaran ee tarragon (tarragon), kaas oo Blooms in August-September oo leh cirro huruud ah (inta badan) ubax. Waxay u dhacdaa inay noqoto mid caan ah oo aan ur u lahayn. Aztec Aztec waxaa ku waajib ah magaca magaca asal ahaan ka yimid Mexico. Xoogaa iyo caleemo adag. Read More
Diyaarinta madax banaan dabaqa kuleylka leh ee ka hooseeya laminate, linoleum iyo foorno
Geedka yaanyo: ma suurtogal in la koro dhul furan oo dhexdhexaad ah
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Warshad ornamental koraya 2019